Ukwakheka Kwensimbi, I-Bridge Yensimbi, I-Steel Curtain Wall - Honghua
Thola amasampula ethu manje!
IGuangdong Honghua Construction Co., Ltd. (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi yiHonghua) iyinsizakalo engaphansi kwezokwakhiwa kweGuangdong Huayu Steel Structure Co., Ltd. iHuayu iyisisekelo sokucutshungulwa kwesibani esisindayo nesimboza indawo engamamitha skwele ayizigidi eziyi-0.15. Umthamo wonyaka wokukhiqiza wenkampani ungafinyelela kumathani ayizigidi eziyi-0.15. Le nkampani ineziqu ze-first-class Steel Structure Manufacturer futhi ziyizisekelo ezibalulekile zokuzenzela eNingizimu China. Le nkampani igxila ekucwaningweni kobuchwepheshe bezinhlobo ezahlukahlukene zezakhiwo zensimbi ezisebenza ngokucwaninga ngobuchwepheshe nentuthuko futhi iyinkampani ehamba phambili kulo mkhakha. Njengengxenye yokwakhiwa ephethwe yiQembu, uHonghua uneziqu zekilasi lokuqala Lensimbi Yokwakhiwa Kosonkontileka, Idizayini Yokwakhiwa Kwensimbi Yekilasi Lokuqala, ikilasi lokuqala Ikhethini Wall Usonkontileka Wokuqala, isigaba sokuqala Umhlobiso wephrojekthi Usonkontileka, isigaba sokuqala Sokuvikelwa Kwezemvelo Iphrojekthi Usonkontileka, usonkontileka weSigaba sokuqala weSisekelo, Osonkontileka Jikelele bezindlu nokwakhiwa, Usonkontileka Osezingeni Lesibili, izinsizakalo zabasebenzi, njll.
Buka okuningi Imikhiqizo yethu
Ukuba neziqu ezisesigabeni sokuqala zokwenziwa kwensimbi eChina.
Inkonzo yamakhasimende, ukwaneliseka kwamakhasimende
Isakhiwo sensimbi yokugcina impahla
Indawo yokugcina impahla yensimbi yenziwa ngochungechunge lwensimbi, kufaka phakathi izinsika zensimbi, imishayo yensimbi, i-purlin njalonjalo. Lezi zinto eziyinhloko zakha isakhiwo esithwala imithwalo yokugcina impahla. Ngenxa yesisindo esincane nokwakhiwa okulula, kunesidingo esikhulu sendawo yokugcina impahla yensimbi. Intambo yensimbi nayo iyona ...
Insimbi yethambo lesakhiwo esinezitezi eziningi kuShe ... 2020-04-01
Ithambo lensimbi lesakhiwo sensimbi (No. 7) eShenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, noma eHonghua, libhekele ukukhiqizwa nokufakwa. Ngiyabonga Shenzhen Airlines kanye neHunan Construction futhi. Isakhiwo esiyisitezi esisodwa yi-bui ...
Steel ibhokisi girder ka abahamba ngezinyawo ukweqa b ... 2020-04-01
Ngenyanga edlule inkampani yethu yenza iphrojekthi yebhuloho lensimbi evela enkampanini yezokwakha kahulumeni. Ngemuva kwezinsuku eziningi zomzabalazo, i-steel box girder yebhuloho lomgwaqo omkhulu isiqedile ukuphakama. Le phrojekthi itholakala eZhaoqing City, esifundazweni saseGuangdong. Ubude bale nyawo yomgibeli-b ...
Luyini uhlaka lwe-portal yensimbi?
Ama-portal ozimele. Amafreyimu ama-portal ngokuvamile ayizakhiwo ezisezingeni eliphansi, ezibandakanya amakholomu kanye nemishayo evundlile noma emisiwe, exhunywe ukumelana nomzuzwana ...
Zakhiwa kanjani izakhiwo zensimbi?
Uhlaka lwensimbi luyindlela yokwakha ene "skeleton frame" yamakholomu wensimbi amile kanye nama-I-beams avundlile, akhiwe ngegridi elingunxande ukuya ...
Kungani usebenzisa isakhiwo sensimbi?
Ngoba isakhiwo sensimbi sinezinzuzo eziningi. Okokuqala, amandla aphezulu. Isilinganiso esiphakeme samandla kuya kwesisindo (amandla ngesisindo ngasinye). Okwesibili ...